Omume Email na-adịghị mma 11 iji zere ọ gwụla ma ị chọrọ ndị debanyere aha iwe | Martech Zone
Dijitalụ Osimiri nke Atọ soro ya rụọ ọrụ Tinyegharịa iji chọpụta omume kacha njọ na omume kacha njọ ndị ahịa email na-egosipụta.
Ihe omuma ihe omuma nke ha mere jikọtara omume obula na agwa ndi mmadu anaghi echefu echefu iji nyere ndi ahia aka icheta ma jikọta omume ojoo. Ha tinyekwara ndụmọdụ bara uru banyere ịgbanwe omume adịghị mma ka ọ bụrụ ezigbo omume.
O bu ihe nwute, obughi onye obula nke na-acho oru ahia email na-eji ha eme ihe. Ọ ga - ekwe omume ị na - eme otu ma ọ bụ karịa n’ime ọtụtụ emezigharị ozi izugbe ndị ahịa maara ama. Matt Zajechowski, Digital Nke Atọ
Ndị a bụ Omume Azụmahịa Email adịghị mma iji zere
Na-agbakwunye ndị debanyere aha ndị abanyeghị na. Ọ bụrụ n'ịga ịzụta ndepụta ma ọ bụ tụfuo pasent buru ibu nke ndị debanyere aha na listi gị, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na ịchọtala nnukwu akaụntụ email gị ma ọ bụ mechie.
ọ bụghị na-asọpụrụ wepu aha arịrịọ. Nwee nzaghachi nzaghachi ma payaa ntị na azịza ọ bụla akpaghị aka na ozi ịntanetị gị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla azaghachi na arịrịọ wepu aha - mee ya!
Na-eme ya siri ike wepu aha ya. Kwụsị ime ka ndị mmadụ banye ma ọ bụ wụfee site hoops iji wepu aha gị na listi nzipu ozi gị. Na-aga ịkwanye ha ịkụ bọtịnụ SPAM.
Na-eziga ọtụtụ ozi ịntanetị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ izipu ọtụtụ… opekata mpe nye nhọrọ iji nata obere. Ọtụtụ ozi ịntanetị na-eme ka ihe ntinye aha karịa ihe ọ bụla.
Na-eziga ozi ịntanetị emezighituri. Obere Akara ókwú, usoro nhazi dị egwu, onyogho ndị anaghị ebu ibu… ha niile na - eduga na ntinye aka.
Na-eziga ozi ịntanetị gabigara ókè. Kwụsị ịdị oke mma na menus na usoro dị mgbagwoju anya. Atụmatụ email dị mfe iji nweta ọnụọgụ nhọrọ kachasị mma.
Izipu ozi ịntanetị na-abụghị na-anabata mkpanaka ngwaọrụ. Kpọrọ… kwụsị ya.
Izipu ozi ịntanetị na edoghị anya edoghi. Ọ bụrụ na ndị debanyere aha ahụghị ihe kpatara ha ga-eji mepee email gị, ha ga-ehichapụ ya kama.
Na-eziga idide ma gbanwee ozi ịntanetị. Ugbu a ị na-anwa ịkpasu ndị debanyere aha iwe ma kọọrọ gị dị ka SPAM.
Hapụ a akpọ-na-eme. Gịnị mere iziga ozi ma ọ bụrụ na ịchọghị ka mmadụ zaghachi n'ụzọ ọ bụla? Ekwela oge ha ma ọ bụ nke gị!
Ezigbo enyi na enyi ma ọ bụ ozi ịntanetị nke ahaziri iche. TMI (Ihe ọmụma buru ibu) nwere ike iyi obere ụjọ, ọkachasị mgbe ị na-amabeghị onwe gị.
Tags: omume ojooidide ma gbanweekpọọ ka ememgbagwoju email imewectaụsọ oké osimiri nke atọịkpọ oku ka ime ihenbanye emailemail nkeonweemail atụmatụemail isiokwuahịrị ederede emailMatt Zajechowskikeonweogbenye imewe emailomume ezighi eziatụmatụ adịghị mmaozispamisiokwudebanye aha ndebanye ahawepu nsogbuwepu aha gịwepu aha na arịrịọedoghị anya edoghi